Ga | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Gburugburu ụlọ akwụkwọ
Emechara ulo akwukwo
OOPS egwuregwu egwuregwu
Ornlọ Ọrụ Nyocha Acorn
Ndị otu ndụmọdụ ndụmọdụ nkwarụ EYSEND
Ozi maka nne na nna na ndị nlekọta
Nkwado na Nursery
Ọzụzụ Ihe Omume vidio nke Ndị Nne na Nna
Otu Nkwado Mpaghara
Ndị na-ahazi Nkwado Mba
Ozi maka ntọala
Olulu Nkwado Documents Main Menu
PIT SENCO Akwụkwọ Ntuziaka
Afọ Barnet Mbido SENCO Toolkit
Olulu Covid-19 Nkwado
Olulu Video Resources
ITdị Ntuziaka Ọzụzụ PIT
ITdị Nzaghachi PIT
#StayAtHome - Ezigbo Nne
Arịrịọ na ozi
Nri akwukwo ulo akwukwo
Nri akwukwo ulo akwukwo na ego umu akwukwo
Nkwụ ụgwọ Online
Nlele Ndị Nne na Nna
Otu Nkwado Ezinụlọ
Agwọ & Nọọsụ
PSA & Nchịkọta ego
Usoro ọmụmụ anyị
Iwu Nchedo Childmụaka
Ohere Ohere Nha
Ulo akwukwo ulo akwukwo ulo
Amụma Nzube nke ụmụ akwụkwọ
Iwu Mmụta Remote
Zipu Ozi Akuko
Atụmatụ Egwuregwu Egwuregwu
Atụmatụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 2021-22
Atụmatụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 2020-21
Usoro Omume Ndị Ọrụ na Iwu Mkpesa Ndị Ọrụ
Barnet Mpaghara Nye
Ihe na Ọrụ
Nkwado Ndị Na-ahazi
Ihe egwuregwu na akụrụngwa
Ihe ICT na-akwụghị ụgwọ na LGfL
Chezọrọ ahambanye gị?
Ebumnuche anyị na Oakleigh bụ na ụmụ akwụkwọ niile na-arụ ọrụ iji zuru ndị bịara abịa.
Anyị anaghị eji nzukọ anyị egwu egwu n'ihi na anyị ma ụmụaka na-aga ụlọ akwụkwọ nwere ezigbo ọganiihu.
Ọ bụrụ na nwa gị anọghị na ụlọ akwụkwọ maka ebumnuche ọ bụla biko soro ntuziaka ndị dị n'okpuru.
Oge ezumike n’oge
N'okpuru ụlọ akwụkwọ ntụzịaka iwu enweghị ike ịnye ezumike maka ezumike. Biko edela ezumike n'oge oge. Havemụaka nwere ezumike izu 13 site na ụlọ akwụkwọ kwa afọ. Ọ bụrụ na enwere ọnọdụ pụrụ iche na ịchọrọ ide akwụkwọ ezumike ma ọ bụ hapụ obodo na oge, biko kpọtụrụ onye isi ụlọ akwụkwọ, na-eji ụdị dị n'okpuru.
Ihe a ga-eme
Biko kpọtụrụ ụlọ akwụkwọ ozugbo tupu 9am kwa ụbọchị iji kọọ oge ezumike na-enye ihe kpatara enweghị. Biko pịa 0 maka ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ yana ọ bụrụ na ọnweghị onye dị iji kpọọ oku gị can nwere ike ịhapụ ozi 24 awa ụbọchị
Nwekwara ike ịfefe akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ banyere ọbịbịa nwa gị site na esemokwu ụgbọ ala ma ọ bụ ọkwọ ụgbọ ala mana ọ na-arụsi ọrụ ike na ụlọ akwụkwọ n'ụtụtụ ma enweghị ike inye ozi ahụ.
Biko zigara nwa gị akwụkwọ ozi ọhụhụ gbasara ahụike ma ọ bụ kaadị. Anyị ga-ewere otu ya ma weghachitere gị nke mbụ.
Ọ bụrụ na nwa gị nwere oge tupu ụbọchị ya, ha kwesịrị ịga ụlọ akwụkwọ tupu ma ọ bụ mgbe emechara ya.
Pịa ebe a maka Ngwa maka Leavehapụ puru iche na-enweghị
Anyị emezigharịrị ebe egwuregwu ụlọ akwụkwọ anyị!
Ndụ na-agbanwe - akụkụ Oakleigh na ụmụaka nwere nsogbu ịma aka.
Mgbanwe nwa oge na ọrụ ahụike dị na Barnet
on 21.10.2020 by Steve Ebert / NHS North Central London CCG
Olọ akwụkwọ 2021 Oakleigh & Oge Mmalite